NeosCoin စျေး - အွန်လိုင်း NEOS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NeosCoin (NEOS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NeosCoin (NEOS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NeosCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $124 333.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NeosCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NeosCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NeosCoinNEOS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0481NeosCoinNEOS သို့ ယူရိုEUR€0.0408NeosCoinNEOS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0368NeosCoinNEOS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0439NeosCoinNEOS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.436NeosCoinNEOS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.304NeosCoinNEOS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.07NeosCoinNEOS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.18NeosCoinNEOS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0643NeosCoinNEOS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0672NeosCoinNEOS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.07NeosCoinNEOS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.372NeosCoinNEOS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.26NeosCoinNEOS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.61NeosCoinNEOS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.8.07NeosCoinNEOS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.066NeosCoinNEOS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0728NeosCoinNEOS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.5NeosCoinNEOS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.335NeosCoinNEOS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.09NeosCoinNEOS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩57.18NeosCoinNEOS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦18.21NeosCoinNEOS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.54NeosCoinNEOS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.33
NeosCoinNEOS သို့ BitcoinBTC0.000004 NeosCoinNEOS သို့ EthereumETH0.000129 NeosCoinNEOS သို့ LitecoinLTC0.000846 NeosCoinNEOS သို့ DigitalCashDASH0.000507 NeosCoinNEOS သို့ MoneroXMR0.000524 NeosCoinNEOS သို့ NxtNXT3.43 NeosCoinNEOS သို့ Ethereum ClassicETC0.00704 NeosCoinNEOS သို့ DogecoinDOGE14.38 NeosCoinNEOS သို့ ZCashZEC0.000525 NeosCoinNEOS သို့ BitsharesBTS1.89 NeosCoinNEOS သို့ DigiByteDGB1.8 NeosCoinNEOS သို့ RippleXRP0.167 NeosCoinNEOS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00166 NeosCoinNEOS သို့ PeerCoinPPC0.167 NeosCoinNEOS သို့ CraigsCoinCRAIG21.95 NeosCoinNEOS သို့ BitstakeXBS2.05 NeosCoinNEOS သို့ PayCoinXPY0.84 NeosCoinNEOS သို့ ProsperCoinPRC6.05 NeosCoinNEOS သို့ YbCoinYBC0.00003 NeosCoinNEOS သို့ DarkKushDANK15.44 NeosCoinNEOS သို့ GiveCoinGIVE104.24 NeosCoinNEOS သို့ KoboCoinKOBO11.34 NeosCoinNEOS သို့ DarkTokenDT0.0443 NeosCoinNEOS သို့ CETUS CoinCETI138.99